トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Ukuze ubone ukuba ingaba umzekelo lokuphumelela ukusuka kumatshini pa imo yokusebenza
Iimfaniso baduma e pa, akukho modeli. Kucacile, kodwa ixesha elininzi abathengi ukuba imodeli lokuhlala Popular. Ngoko ke, kamsinya nje buqapheleke engena ivenkile pa, ndicinga ukuba Kakade imodeli umthengi has a lot of ehleli. Thenga le meko yonke yokusebenza, kodwa iya kwahluka ngayo intlawulo kunye umbono yonke evenkileni, ithi into enye malunga neemeko zokusebenza imodeli-ezithile ezivenkileni. Ethetha
kakhulu abathengi nca imifuziselo kakuhle, kodwa Xintai, Xintai na kukho izinto ezininzi ukuba zenziwe sokubuyisa ixesha ekuphulukenwe nalo.
Xintai na, kuba kaloku izicacele kukho esebenza kakuhle othandwayo, ulahlekiswe ngokusebenza Xintai, ndicinga ukuba ukuze aphume, nceda uqaphele ukuba maxa wambi ukuze atshiswe xa ekuhlaleni wayeza.
kwakhona, kwaye ngaphandle imifuziselo ibhilibhodi ngendlela ezinzileyo, ezifana ukonwabisa phinda abathengi okanye ndingaphila, ngokufuthi, nesendlu pa ukuba zisebenza.
Noko ke, kukho kwakhona elibe pa awuzukuba ingako ukusayina imifanekiso. Ethetha into eyenzekayo nto kwimeko enjalo, kuba izinga ukuchacha imodeli ibhilibhodi iphezulu kakhulu. ukusebenza pa onendawo le modeli ayikho ukucinga ukuba imifuziselo ibhilibhodi, thina izinga badla ukufunyanwa yonke evenkileni kwakhona eliphezulu ngokwaneleyo.
Ngoko ke, kuqala wangena evenkileni, ukuba abone ukusebenza imifuziselo ibhilibhodi, Inyaniso yile, kangangokuba kubaluleke kakhulu. Ukongeza, kukho ityala apho kukho ngokubaleka kwimodeli, ezifana kwakukho Xintai kunye owayesakuba ukusetyenziswa kakhulu kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Kwimeko enjalo, okanye ukuba, xa kuthe imodeli, kodwa elinamalungelo afanayo nalawo-Xintai kunye nokuqondwa igama ziwile apho, egameni lo mcimbi, ezifana ukusebenza phaya phezulu ngenxa uhlobo kulondolozo operation ukuba akukho Akusekho ngoku, ukusa kumkhamo othile isikhonkwane ukuze ube ukulungiswa. Ukuba kukho ngokubaleka kwimodeli, ezifana wavuswa
khona, kuya kuba kuhle ukuba bahlale. Indlela yokuqhuba ishishini isimo imifuziselo
, ukuze kuthiwe ukuba esebenzayo ukukhangela imifuziselo ezinenjongo, Noko ke, kwezinye iimeko abantu izicacele ukuba kukho isebenza njengoko Xintai in reverse, ngenxa Good pa onendawo le ukusebenza ukususela zesiqhelo okanye ezifana, ukuze babe iziganeko ezithile, njl, umzekelo ofuna ukubetha ukuba wena okanye Mitsurudai, ukuba ziphalale ngokudlala nabanye imifuziselo, le venkile eqhelekileyo apho ukuba basiqonde isimo yokusebenza, kuya kufuneka Sankounisuru.
kuba kukwakho izinto ezininzi ukuba akunakutshiwo ukuba kukho ndiyathandwa kuba ngaphandle kwemiqathango kukho utyando, ndicinga ukuba akukho kuyingozi isigqibo injongo kakhulu ekuhambeni kuphela.
uhlengahlengiso isikhonkwane kunye nokubalulwa, njengoko kubonakala ukusuka data, kunye engile ezifana ezahlukeneyo, okanye kuba ngenene kucinywa nokubaleka ilungile, nje okanye uthenga yonke ukusebenza ukuba yokuhlala ephakamileyo kuphela ngenxa ezilungileyo, ukuchonga ukusa kwinqanaba elithile.
ukubukela yesiqhelo kakuhle iivenkile yemeko yokusebenza, njl, zama ukusebenzisa ngendlela eyiyo ulwazi kwakhona imo yokusebenza le modeli. Abathengi omzabalazo, kuya kuba novelwano evenkileni lwabantu. Ngokuhlaziya umsebenzi imodeli le, ukuba unalo ityala ukuza kwakhona ukubonisa ezifana iivenkile ngakumbi mkhwa.